I-China Quality Wall Plate Cable Pass Through Umkhiqizi, Ifektri - I-Connexions Technology (Dong Guan) Ltd.
Ikhaya > Imikhiqizo > Ikhebula Wall Plate > Ikhebula Le-Wall Plate Lidlula
I-1-Gang Recessed Wall Plate
Leli puleti lodonga lwentambo yesigaxa esiningi lingasetshenziselwa ukumboza indawo yokuphuma yamakhebuli kagesi aphansi ukwakha ukubukeka okuhlanzekile, kobungcweti ngaphandle kokungeza isikhathi esengeziwe noma ucingo. Kusetshenziswa izikulufo ezihambisana nombala, leli puleti lodonga linamathela kalula kunoma yiliphi ibhokisi lezigelekeqe noma kubakaki. Iphrofayili ephansi engu-1-1 / 8â € isho ukuthi leli cwecwe lodonga lingangena ngokuphepha ezindaweni eziningi eziqinile kubandakanya ngemuva kwefenisha nakwezinye izintaba zethelevishini.
I-2-Gang Wall Plate
Le Gang Wall Plate emibili yenzelwe ukuphathwa kwentambo yangaphakathi kwe-HDMI, i-coax, idatha, izwi nokunye ukufakwa kwamandla kagesi aphansi. Ama-Wall Plates ethu abethunyelwa e-US nase-Europe ngamasheya amakhulu emakethe.
I-1-Gang Wall Plate
Isixazululo esifanele sokufihla izintambo zomsindo we-low-voltage noma ividiyo ngaphakathi kodonga lwakho. Iyanciphisa imfuhlumfuhlu yocingo, futhi inikezela ngohlelo lokuphatha ikhebuli olufihlekile lwama-TV epaneli ayizicaba, amasistimu wokudlala, noma induduzo yokuzijabulisa Imigqa eminingi ingadluliswa ngepuleti elilodwa likuvumela ukuthi uhlangane futhi uqondane ngenkathi kususwa isidingo sokuthi amapuleti amaningi asatshalaliswe odongeni lwakho .
Singabakhiqizi nabahlinzeki be- Ikhebula Le-Wall Plate Lidlula abaqeqeshiwe e-China, abakhethekile ekunikezeni insizakalo eyenziwe ngezifiso. Uma uzothenga ikhwalithi ephezulu ye- Ikhebula Le-Wall Plate Lidlula esitokweni, wamukelekile ukuthola ikhotheshini efektri yethu.